Iyo Yakanakisa Dhivhizheni Series, wakambovaona vese here? | Ndipei zororo
Iye zvino, akateedzera pa internet kana terevhizheni zvakakosha muhupenyu hwedu mazuva ese. Kune akawanda marudzi, asi pane imwe iyo haimbofi yakabuda muchitaera: kudanana! Ndokusaka ndichipa a yakasarudzika sarudzo neakanakisa erudo akateedzana.
Kudanana inyaya yekufarira kwazvose muzvokwadi uye fungidziro. Hukama hwehukama hunonakidza uye hauna chokwadi - zvakare hwakaomesesa! Kubatanidza pfungwa, manzwiro uye zviito zvinoburitsa husingaperi hwenyaya nemhando dzese dzemhedzisiro, idzo dzinoshandiswa kugadzira zvirimo muindasitiri yevaraidzo.
Nakidzwa nesarudzo yedu neyakanyanya kudanana akateedzana enguva dzichangopfuura.!
1 Zvepabonde muNew York
2 Chiedza cheMwedzi
3 Gilmore Vasikana
4 Iyo nguva iri pakati pemaseams
5 Kusangana Kwandakaita Naamai Vako
6 Cable vasikana
8 Iko kusarudzwa kweakanyanya kudanana akateedzana akazara nekitsch?
Zvepabonde muNew York
Iyo yakateedzana yeAmerica ine zviyero zvakakwirira zvakatora makore matanhatu (1998 kusvika 2004) iine mwaka nhanhatu. Zano iri yakagara muNew York City. Isu tinowana vakadzi vana sevapikisi: Carrie, Miranda, Charlotte naSamantha.
Iyo inoratidzwa ne inoratidza mararamiro evakadzi munyika yanhasi uye muguta guru: rudo uye zvinetso zvebasa, kusawirirana pakati pevanhu uye kutarisa kukuru pahukama nehukama hweboka iri reshamwari vanoumba misoro mikuru. Iyo ndeimwe yeakanyanya kudanana akateedzana kunze uko!
Isu tinowana mune yega yega episode zviitiko zvitsva zveva protagonist izvo zvinosanganisira avo vavanodanana navo, mabasa avo uye yakawanda bonde! Iwo akateedzana anotyora mapadigamu zvine chekuita nebasa rakaitwa nevakadzi mune yekupedzisira nyaya yataurwa.
Kazhinji, chikamu chega chega chinotungamira mukufungisisa nezvehupenyu uye hukama uye hwehukama hukama hunofambidzana nezvishuwo zvemunhu wese.
Kubva munhoroondo ye "Bonde muNew York" mafirimu maviri akaburitswa akaburitswa muna2008 na2010, pane fungidziro pamusoro pechikamu chetatu asi kutora chikamu kweumwe wevatsigiri vakuru kuri panjodzi.
Iwe unogona kuwana zvirimo zvemwaka wese pane epuratifomu mapuratifomu eHBO neAmazon!
Ndicho American terevhizheni classic nyeredzi iye zvino inozivikanwa Hollywood mutambi Bruce Willis uye mutambi Cybyll Shepperd.
Nyaya inotaurwa nezve a mutikitivha agency Yakagadzirwa neyeimbove modhi inonzi Maddie Heyes naDavid Addison. Muchikamu chega chega makesi akateedzana anoonekwa achigadziriswa panguva imwe chete ne hukama hwepedyo pakati pezviviri hunokura.
Yakamhanya kwemakore mana: pakati pa1985 na1989. Unogona kuwana akateedzana paAmazon Prime.
Yakagadzirwa naAmy Sherman-Palladino, iwo akateedzana ayo anosanganisira kudanana, mutambo, uye komedhi. Ino nyeredzi amai vasina murume uye mwanasikana wavo ari kuyaruka, ivo, zvakare, vakaita seshamwari dzepedyo. Yakagara kwemakore manomwe aine mwaka wekutanga pagore.
Iyo nyaya inorondedzera hupenyu hwaLorelai, uyo anozvara Rory panguva yekuyaruka uye anobva kumhuri yakapfuma. Anopandukira vabereki vake vanodzora uye anosarudza kubva pamba pazera diki rekurera mwanasikana wake ega. Nesimba rakawandisa, anokwanisa kuwana hotera diki yaanomhanya uye panoshanda pamwe shamwari dzake mbiri dzepedyo.
Iwo akateedzana anotanga makore gare gare, paanoenda kuvabereki vake kunotsigira muzukuru wake nedzidzo yake. Mhuri inosanganazve uye vasikana veGilmore vari kuita kudya kwemanheru pasvondo kumba kwasekuru nasekuru vavo.
Kune rimwe divi, Rory muyenzaniso wevechidiki: ane basa, akanaka, ane rudo, akangwara uye ane mukomana wekutanga akakwana. Mumwaka wese wekutanga tinoona maitiro aanodzidza kubata nezvinetso zvekuchikoro, kusiyana kwemagariro uye nyaya dzerudo dzinoomesera zuva rake zuva nezuva. Zvinotaridza kukura kwake kusvika apedza kudzidza kukoreji uye ndokuzova mutori wenhau.
Vaviri protagonists vanoenda kuburikidza akasiyana rudo vakaroorana mumwaka wakasiyana mwaka kusvika vawana kwavo kwechokwadi rudo. Iwo akateedzana anotipa chidzidzo pamusoro pekukosha kwemhuri, hushamwari uye kukosha kwekuomarara muhukama.
Muna 2016, Netflix yakafunga kuburitsa mini nhepfenyuro nevose vanodzoka mavara: "Mwaka mina yeGilmore Vasikana". Iyo inotevera inovandudza isu pahupenyu hwaLorelai naRory, pamwe nevanhu vakavakomberedza.
Isu takawana shanduko hombe mamwe mavara uye kushamisika kusingatarisirwe kumagumo! Kufungidzira nezve kuenderera kuri mumhepo ...
Iko kuchinjiswa kwenhoroondo yenhoroondo yekuSpanish mavambo, yakaunzwa kuchiratidziro muna2013 muchimiro cheterevhizheni ine zvitsauko gumi nemanomwe. Iye protagonist ndiSira Quiroga, mukadzi anotamba netsiva Adriana Ugarte.
Sira, iye mugadziri wechidiki wekupfeka yekuzvininipisa mavambo kubva kuguta reMadrid. Akakura achishanda saasonstress mumusangano weshamwari yepedyo yaamai vake, uyo aive iye akamudzidzisa hunyanzvi hwekugona machira uye tsono.
Anosiya waanodanana naye kuti aende naRamiro, mukomana akanaka iye achangobva kusangana naye uye waanodanana naye zvakapenga murudo. Ivo vanogara muTangier, Morocco uye vanotanga kurarama mazuva echiroto azere neumbozha, mapato uye nguva dzakanaka.
Pasina kutarisirwa kuti Ramiro anobva muguta mushure mekutambudzwa nekuda kwekubiridzira, mhosva iyi inopomerwawo Sira, nekubatana. Iye anowana chibvumirano chekubuda mudambudziko uye akamanikidzwa kutamira kuTetouan. Panguva imwe chete inoputika hondo yevagari vomuSpain uko amai vake vari panjodzi.
Aine chitupa chekunyepa, akatanga musangano wekusona muguta iro uye akazova imwe yenzvimbo dzakakurumbira senzanga yepamusoro. Munguva iyoyo anosangana nemutori wenhau akanaka waanodanana naye uye vanoparadzana nekuda kwezvikonzero zvavasingakwanise kudzora.
Imwe nguva gare gare, ivo vanoita iyo kupa kudzokera kuMadrid uye uve musori wepachivande wehurumende. Gadzira musangano wekusona kukwezva vepamusoro kirasi. Iye ane hukama nevakuru veGerman vakuru uye mune kosi iye anosangana nerwake rwekare rudo uyo ane akawanda zvakavanzika zvekuvanza futi.
Izvo zvirimo zvizere nerudo uye zvakavanzika. Inowanikwa paNetflix.
Iyo nyaya yausingakwanise kupotsa!
Kusangana Kwandakaita Naamai Vako
North America nhepfenyuro ine mwaka pfumbamwe yakaburitswa kubva 9 kusvika 2005. Iyo rangano inotaurira nyaya yekuti Ted Mosby akasangana sei nemukadzi wake naamai vevana vake.
Nhoroondo ndeye yakataurwa ne protagonist anogara muNew York uye anotsanangurira vana vake kuti akawana sei rudo rwechokwadi muhudiki hwake. Chikamu chega chega mutambo, mutambo uye rudo.
Ted ine boka reshamwari dzakanakisa: Marshall, Lilly, Robin naBarney. Ivo vanotaura zvavo pachavo nyaya panguva dzakateedzana kuti zviwedzere kunakidza. Matambudziko akajairika erudo uye hukama hwehukama hunoonekwa muhudiki.
Ndiyo yekutanga Spanish yakateedzana iyo inoumba yakasarudzika zita reNetflix. Yakatanga kubudirira kwazvo muna 2017 uye mwaka miviri yakaburitswa mugore rimwe chete. Kuenderera mberi kwekutanga musi waGunyana 7, 2018. Iyo protagonist mutambi wechiSpanish Blanca Suarez.
Mutambo werudo ndewe yakaiswa muma20 uye inotaura nyaya yevakadzi vana vanoshanda mukambani huru kwazvo yekutaurirana muMadrid kuita basa revashandisi vefoni.
Lidia ndiye mutambi mukuru Anotakura zvakavanzika zvakawanda kubva munguva yake yakapfuura mumutoro wake uye nemukana anosangana nerudo rwake rwekuyaruka kukambani kwaanoshanda iye zvino, kune rimwe divi muridzi wekambani anofadzwa nerunako rwake nehungwaru. A rudo katatu izere nekusawirirana uye nguva dzinodakadza.
Kune rimwe divi tina Ángeles, Carlota naMarga vanoumba chisungo chakasimba kwazvo cheushamwari naLidia. Mumwe nemumwe wavo ane hunhu hwakasiyana uye nemararamiro. UyeIsu tinowana zvakati kuti zvekupokana muchirongwa ichi sezvo zvichisanganisira nyaya dzakaputsa paradigms panguva iyoyo, yakadaro nyaya yeungochani uye kurambana.
Iyi nyaya ndeimwe yeedu epamoyo pane runyorwa rweakanakisa erudo akateedzana!
Netflix yepakutanga kugadzirwa iyo yakatanga mu2016 uye kusvika parizvino mwaka miviri iripo papuratifomu.
Ndicho Nhoroondo yakajairika yevaviri avo vari nyore kuziva. Ivo vane yakakura kemisitiri uye kunyangwe ivo vasiri ivo vakaroora vakakwana vanotsanangurwa nenzanga, isu tinowana inonakidza shanduko pakati pevaviri vanoita Mickey naGus.
Iwo akateedzana anopa zvidzidzo muhupenyu sevakaroora nezve kukosha kweunhu uye kuomarara, pamwe nekudikanwa kwekuyanana pakati pebonde nerudo. Iyo protagonist ine yakawanda masitayera uye iwe uchafarira kuona kuti vaviri vacho vanogadzirisa sei matambudziko avo nenzira dzakasiyana uye kufumura akasiyana maonero ekuona eboka reshamwari dzinovatenderedza.
Iko kusarudzwa kweakanyanya kudanana akateedzana akazara nekitsch?
Chenjera, hapana chikonzero chekuvhunduka! Hapana rimwe remazita aratidzwa ihwo huchi chaihwo, sarudzo inoenderana nemubatanidzwa werudo nezvimwe zvinhu: tine komedhi, mutambo, chiito, fashoni, zvakavanzika, espionage uye zvimwe zvinhu. izvo zvichaita kuti unakirwe yega yega akateedzana zvakanyanya.
Zvekuratidzira zvakateedzana zvinomiririra kurapa sezvo zviri nyore kugaya, kuti iwe ugone kuzorora uchidzidza chinhu chitsva kana zviviri nezve rudo nehupenyu hwakawanda. Kana yako iri yerudo genre, iwe unofanirwa kuona ese akateedzana akakurudzirwa mune ino posvo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Akanakisa erudo akateedzana